#JisieIke: Ka mmachibido iwu Twitter na -emetụta ndị ntorobịa Naịjirịa · Global Voices n’asusu Igbo
"Mmụọ m jụrụ onyi ụbọchị a mara ọkwa akụkọ a."
Written byVictoria Audu
Translation posted 10 October 2021 15:03 GMT
Read this post in Français, English, Español, Malagasy, Dansk, русский, English
Ọ bụ ihe atụ maka mmachibido amachịrị Twitter Naịjirịa? Otu nwa agbọghọ onye Naịjirịa nọ n'azụ ogige. Foto nke Muhammadtaha Ibrahim Ma'aji, Pexels, nweere onwe ya iji.
Ọnwa abụọ mgbe gọọmentị Naịjirịa mechiri Twitter, ọtụtụ ndị ntorobịa nwere azụmahịa, ndị na -emetụta mgbasa ozi mmekọrịta, na ndị mere ngagharị iwe kwụrụ ka ọ emetụta ha nke ukwuu, Global Voices (Olu Mba Ụwa) gwakwara ha ka ha ghọta mmetụta mmachibido iwu a na ndụ ha na azụmaahịa ha. Egwu ji ndị mmadụ na ọ ga -ekwe omume ịgbasa nkwusioru a na nyiwe mgbasa ozi ọhaneze ndị ọzọ dịka Instagram emeela ka nchegbu karịa ha arụ.
Ihe ijuanya nke gọọmentị Naịjirịa bịara ka ọnwa Juun nọ na mkpụrụ ụbọchị anọ nke afọ puku abụọ na iri abụọ na ọtụ mmachibodo Twitter ka na -agbagha. Gọọmentị Naịjirịa machibidoro igwe okwu soshal midia ka Twitter chere na ọ na ọ dịghị mma ma hichapụ tweet onye isi ala Muhammadu Buhari kwuru nke na -atụ aro na steeti ahụ ga -eji ime ihe ike megide agbụrụ Igbo.
Kemgbe ahụ, ọtụtụ ekwuola na nkwụsị gọọmentị nke ikpo okwu obere ụzọ mmadụ n'ibé ya si na mmegwara maka nkwado Twitter maka ndị ntorobịa na-edu na Ọgụstụ afọ pụkụ abụọ na ịrị abụọ #KwusiSARS megide obi ọjọọ ndị uwe ojii.
GỤKWUO: Soshal midia ghọrọ ngwa na-azọpụta ndụ ndị Naịjirịa. Ugbu a, ha ga -alụ ọgụ maka ya.
Ndị Naịjirịa nupụrụ ịsị na mmachibido iwu ahụ site n'iji hashtag #JisieYaIke bụ Mgbasa #JisieYaIke bụ njikọta nke ihe karịrị nyocha nkwado narị abụọ, mgbasa ozi na otu, gụnyere NwereKitaa ise, “ dị n'ime mba iri asaa na gburugburu ụwa, na -alụ ọgụ iji kwụsị mmechi ịntanetị n'ụwa niile.” Na ụbọchị iri abụọ na isii nke ọnwa Mee, afọ puku abụọ na iri abụọ, Twitter wepụtara emoji pụrụ iche iji kwado mkpọsa #JiesieYaIke:
Anyị nwere olile anya na emoji #JisirYaIke ọhụrụ ga -eme mkparịta ụka gbasara ọgụ megide #MechiIntaneti n'ofe ụwa. Nzube nke @MegheKita bụ nke zuru ụwa ọnụ. Ọ na -anọchite anya oghe na ike. Ọ na -egosipụtakwa mkpa ọ dị ịnweta ya.
- Iwu Ọha na Twitter (@Policy) Uboch ịrị abụọ n'isi I nke ọnwa Mee, afọ puku abụọ na iri abụọ.
GỤKWUO: Mkpuchi Pụrụ Iche nke Voices Global -#EndSARS: Otu ndị ntorobịa iji kwụsị obi ọjọọ ndị uwe ojii na Naịjirịa
‘Instagram nwere ike ịbụ ọzọ’
Mmachibido Twitter emetụtala ndị mmadụ dị iche iche ọkachasi ndị ntorobịa: ndị ọchụnta ego bụ ndị Naịjirịa na -eme ka ihe ha ji ebi ndụ n'elu ikpo okwu site na ire ngwa ahịa na ọrụ ha; ndị na -eji Twitter achị ọchị na izute ndị ọhụrụ; na ndị na -adabere n'elu ikpo okwu maka nkwado okwu.
Onye na achụ nta ego n'obodo Lagos nke nwere azụmaahịa ọla (ahapụrụ aha ya maka nchekwa) bụ otu n'ime ndị ntorobịa na- azụ ahịa na Naịjirịa dabere na ikpo okwu iji rute ndị ahịa ha. Ọ gwara Global Voices, “Enwere m mwute ọjọọ nke ukwuu ụbọchị a mara ọkwa akụkọ a.”
Agbanyeghị onye na azụ ahịa ola a na Lagos nwere akaụntụ Instagram maka azụmaahịa ya, ọtụtụ ahịa ya na -esite na akaụntụ Twitter ya. “Inweta ndị na -eso ụzọ na Instagram bụkwa ihe siri ike. Enweela m ihe dị ka ndị na-eso ụzọ narị anọ na Twitter, ”onye dị afọ iri na asatọ gwara Global Voices.
Onye ntorobịa ọchụnta ego a anaghị echefu uru ọnụnọ ya n'elu ikpo okwu gbakwunyere n'ahịa ya. Ọnụ ogụ enyerela aka n'ịkwado ya dị ka onye ọchụnta ego n'ihe metụtara ụkpụrụ na Twitter. Ọ na -egosikwa ka azụmaahịa ya si bụrụ ihe dị mkpa na ndụ ya ebe ọ nwere ihe ọ nwere ike wepụta oge wee zụọ ya.
Onye na -ere ọla a na ndị Naịjirịa ndị ọzọ ka na -arụsi ọrụ ike na Twitter n'agbanyeghị mmachibido iwu ahụ, site na iji ngwa mgbagharị VPN. Agbanyeghị, iji VPN nweta ikpo okwu emebeghị ka nsogbu ha belata. Ntugharị tweet ha site na mba ndị ọzọ achụpụla ndị na -ege ntị na ahịa nke ndị ọchụnta ndị ntorobịa Naịjirịa.
Ads just dey waste, no solid returns, but some crazy people still think it’s good. Okay oh ?
Mmachibido iwu Twitter a na -emetụta ọtụtụ ụlọ ọrụ na -azụ ahịa dijitalụ, n'ihi na VPN ndị mmadụ anaghịzi agbanyụ maka ọtụtụ nyiwe mmekọrịta.
Mgbasa ozi na -emebi emebi, enweghị nloghachi siri ike, mana ụfọdụ ndị nzuzu ka na -eche na ọ dị mma. Ọ dị egwu
Ọ bụghi Onye nwe ihe ịchọ mma na Lagos ihe ọhụrụ iji VPN, na -atụkwasị obi na ha n'oge gara aga iji nweta ihe dị mfe maka ụtọ ya dịka ịnweta ihe nkiri na Netflix na -adịghị na Naịjirịa. Kemgbe ahụ ọ nwara iji ha banye na Twitter. Otú ọ dị, ọ na -akwa arịrị na ọ nwere ike ịgwụ ike n'inwe VPN na -emetụta ngwa ya ndị ọzọ dị ka Pinterest ebe a manyere ya ilele ederede n'asụsụ ọzọ.
Nwalema, onye ntorobịa na -emepụta ọdịnaya, onye na -emetụta mgbasa ozi mmekọrịta, na ihe nlereanya na -enwekwa mmachibido iwu Twitter. Ọ tụlere ọnọdụ a na mkparịta ụka ya na Global Voices. Obodo a yiri ka ọ nọ n'ọchịchị nke “ọchịchị aka ike,” ka o kwuru. Ọ na -atụ ụjọ na gọọmentị ga -amachibido “Instagram nwere ike bụrụ nke ọzọ”, n'agbanyeghị na gọọmentị ekwughị na ha ga -amachibido ikpo okwu a. Ọ na -echegbu onwe ya na ha ga enye ikikere ma ọ bụ mmachibido usoro mgbasa ozi ọhaneze niile na mba ahụ ga -akọwapụta ya dịka mbibi. Ndị ọzọ na -emetụta ya, ọkachasị ụmụ akwụkwọ na -enweta ihe ha ji ebi ndụ n'elu ikpo okwu.
Onye a nwe ebe ana ere ihe ịchọ mma na Lagos abụghị onye ọhụrụ na ihe gbasara VPN, na -atụkwasị obi na ha n'oge gara aga iji nweta ihe dị mfe maka ụtọ ya dịka ịnweta ihe nkiri na Netflix na -adịghị na Naịjirịa. Kemgbe ahụ ọ nwara iji ha banye na Twitter. Otú ọ dị, ọ na -akwa arịrị na ọ nwere ike ịgwụ ike na -enwe VPN na -emetụta ngwa ya ndị ọzọ dị ka Pinterest ebe a manyere ya ilele ederede n'asụsụ ọzọ.
Ndị ọzọ na-eji Twitter dị ka ikpo okwu iji gosipụta echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha na ime mgbanwe site na ịkwado. Otu n'ime ndị na-ahụ maka ịntanetị dị otu a bụ Chisom Agbodike, nwata akwụkwọ a dị afọ iri na itoolu na-agụ akwụkwọ n'Ekiti na ndịda ọdịda anyanwụ Naịjirịa. Agbodike na -akwado ikike LGBTQ+ ma na -eji ikpo okwu gosipụta echiche ndị a. Kemgbe mmachibido iwu Twitter bidoro, ọtụtụ ndị ntorobịa Naịjirịa, gụnyere Agbodike, anọla na nsọtụ n'ihi echiche na -atụ egwu nke obodo ji nwayọọ nwayọọ na -achị onwe ya na -emegide ọchịchị onye kwuo uche ya.
Onye nwe ebe ana-ere ọla na Lagos bụ Nwalema na Agbodike bụ naanị ihe atụ ole na ole nke nde ndị ntorobịa Naịjirịa chọtara nkasi obi na soshal midia – ọ bụrụ naanị maka ntụrụndụ, ịnụ olu ha, ma ọ bụ ịkpata ihe ha ji ebi ndụ – ma ugbu a amachibidoro ya site na gọọmentị.
Otu ihe pụrụ ijide n'aka bụ na ọtụtụ ndị ntorobịa enwekwaghị na ọchịchị onye kwuo uche ya nke Nigeria na -ekwu na ọ na -eme. Ka ọ sina dị na ebe ha nọ, #KwusieIke bụ nhọrọ kacha mma maka nzọpụta ha.
Edemede a bụ akụkụ nke usoro mgbasa ozi na -enyocha ndị gara aga na ndị na -akwado ugbu a n'ịntanetị maka nghọta, ịza ajụjụ na ezigbo ọchịchị nke ndị ntorobịa Naịjirịa. Ọrụ ide ihe a bụ akụkụ nke nkuzi nkwukọrịta dijitalụ maka ụmụ akwụkwọ afọ abụọ nke Mass Communication, Ụlọakwụkwọ nke Media na Communication (SMC), Mahadum Pan Atlantic, Lagos, Naịjirịa , Lagos, Naịjirịa . Ọrụ a dabara n'okpuru mkpesa ikike dijitalụ Global Voices na ọzụzụ ụlọ akụkọ maka ụmụ akwụkwọ nkwukọrịta gburugburu ụwa.
This post is part of Ndị Nkwuchite GV, a Global Voices project dedicated to protecting freedom of expression online. All Posts
Ndị Nkwuchite GV
Naịjiria 5 October 2020